Забур 11 CARS - Nnwom 11 AKCB
Adɛn na wutumi ka kyerɛ me se,
“Tu te sɛ anomaa kɔ wo bepɔw so.
2Na hwɛ, amumɔyɛfo akuntun wɔn ta mu,
na wɔde wɔn mmɛmma asisi ahama so
sɛ wɔbɛtow wɔ sum mu
de awɔ koma mu ahotefo.
dɛn na ɔtreneeni betumi ayɛ?”
Awurade te ne soro ahengua so.
5Awurade hwehwɛ ɔtreneeni mu,
na amumɔyɛfo ne wɔn a wɔpɛ basabasayɛ de,
ne kra kyi wɔn.
6Ɔbɛtɔ ogyatannaa ne sufre a ɛredɛw
agu amumɔyɛfo so;
na mframa a mu yɛ hyew bɛyɛ wɔn kyɛfa.
7Awurade yɛ ɔtreneeni,
na ɔpɛ atɛntrenee;
wɔn a wɔteɛ no behu nʼanim.
AKCB : Nnwom 11